Cabdimaalik Coldoon oo xukun adag laguriday - Idman news
Cabdimaalik Coldoon oo xukun adag laguriday
Maxkmada Racfaanka ee Hargaysa, ayaa 2 sanno oo xadhig ah iyo 3 milyan oo Somaliland Shilin ah ku xukuntay Cabdimaalik Muuse Coldoon.
Maxkamada Gobolka Maroodijeex ayaa Coldoon horay danbi ugu wayday 3, February, 2022, kadibna xeer ilaalinta ayaa racfaan ka qaadatay, racfaankaas oo ay ka dhalatay in maanta lagu rido xukunkan kadib muddo ay dacwadi ku socotay.
Coldoon oo ka tirsanaa warbaahinta Somaliland, isla markaana markii danbe noqday shakhsi baraha bulshada caan ka ah, ayaa loo haystaa eedo uu u jeediyay shabakada dugsiyada ee Abaarso, oo uu sheegay in macalimiin toodu ay diinta Masiixiga bulshada ku dhex faafiyaan.
Coldoon ayaa dhowrkii sanno ee lasoo dhafay aad uga hadli jiray dugsiga Abaarso oo laga leeyahay dalka Maraykanka, iyo Xarunta dhaqanka ee Hargaysa oo uu ku eedeyn jiray in ay soo marti qaaday dad isku jinsi ah.
Hadaba, Coldoon oo marar horena xabsi u galay isla arrintan awgeed, ayaa 19, 8, 2021, laga soo qabtay xafiiskiisa shaqada oo ku yaala magaalada Burco, isagoo muddo 9 bilood ah oo ay dacwadiisu socotay ku xidhnaa xabsiga Madheera iyo Xabsiga Dhexe ee Hargaysa.
Previous DAAWO:-Farmaajo oo xilka kuwareejiyay Xasan Sheekh
Next Farmaajo oo shaaciyey xogta askartii la geeyey Eritrea iyo Madaxweyne Xasan oo jawaab bixiyey
C/raxmaan C/shakuur oo Ilhaan Cumar ka codsaday inay qeyb ka qaadato gurmada abaaraha ee dalka
C/raxmaan C/shakuur oo Ilhaan Cumar ka codsaday inay qeyb ka qaadato gurmada abaaraha ee dalka June 29, 2022